China 900KG, 1Ton Bhokisi magineti e Precast Tilting Tafura Mould Kugadzirisa vagadziri uye vanotengesa | Meiko Magnetics
900KG, 1Ton Bhokisi Magineti EPrecast Tilting Tafura Mould Kugadzirisa
900KG Magnetic Shuttering Bhokisi inozivikanwa inozivikanwa saizi yemagineti ekugadzira epaneru kugadzirwa kwemadziro, ese emapuranga uye esimbi padivi mould, yakagadzirwa nekabhokisi bhokisi goko uye seti yeNeodymium magnetic system.
900KG Bhokisi remagineti yakajairika magineti bhokisi saizi ye precast mafomu ekuvaka, ese ematanda uye esimbi padivi muforoma, yakagadzirwa nekabhoni bhokisi goko uye seti yenyika isingawanzo neodymium magnetic system.
Inogona kuvhurwa nekungodzvanya pasi bhatani neruoko kana tsoka. Kuti usazvishandise, magineti anosunungurwa zviri nyore nesimbi lever (kudhonza bhatani pa). Mune isingashande nzvimbo, iwo magineti ekuvhara anogona kubviswa zviri nyore kubva patafura fomu. Iwo precast kongiri magineti aigona kushandiswa ega kana kubatana neadpator kugadzirisa mafomu. Kazhinji 900Kg yakatarisana nechisimba bhokisi remagineti inokodzera zvakakwana 60-90mm ukobvu pamadziro ekugadzirwa.
Isu, Meiko Magnetics, inyanzvi mumhando dzese dzemagineti mhinduro ye precast kongiri indasitiri. Iwe unogona kuwana zvese zvako zvakajairika zvinodiwa kana zvakagadziriswa magineti system pano ye precast.
Pashure: 450KG Bhokisi remagineti nePush-dhonza Bhatani
Zvadaro: 1350KG, 1500KG Rudzi rweMagnetic Formwork System
1000KG Bhokisi Remagineti
1Ton Kugona Magnet Bhokisi
900KG Bhokisi remagineti
900KG Bhatani Magnets
900KG Kugona Concrete Magnet
900Kg Magnetic Fomati Sisitimu
900KG Precast Kongiri Magonyeti
900Kg Shuttering Magineti